M2TS in MP4 - Sida loo Beddelaan M2TS in MP4 la M2TS in Converter MP4
AVCHD video diiwaan by kaamirada AVCHD, sida kaamirada Sony HDR-SR1. M2TS faylasha sida caadiga ah u qoraan gal 8cm mini DVD S buluug-ray ama DVDs, kaararka xusuusta SD iyo Xasuusta ul, ama u qoraan gal fiidiyo drive adag.
Maqaalkani waxa uu ku talin doonaa M2TS ah in Converter MP4 . Markaasay aad ku raaxaysato kartaa video M2TS meel kasta iyo waqti kasta.
Qeybta 2: M2TS Free in Converter MP4
Qeybta 3: M2TS Online in Converter MP4
Qeybta 1: M2TS Best in MP4 Video Converter for Windows / Mac (Yosemite ka mid ah)
• Beddelaan 150+ qaabab video ay ka mid yihiin MP4, M2TS, AVI, MKV, MOV , iwm
• filaayo in presets in si fudud loogu badalo wax video taam aad Android ama telefoonada Apple, iMovie, Final Cut Pro, iwm
• Gubashada M2TS in DVD wanaagsan qaybsiga aad saaxiibada iyo qaraabada.
• Mid ka mid ah click in si deg deg ah kala soo bixi YouTube, Facebook, Dailymotion videos iyo in ka badan.
Fiiro gaar ah: Dadka isticmaala Mac, isku day plese Wondershare Video Converter Ultimate for Mac .
Sida loo badalo M2TS in MP4
Just heli tutorial hoose ee ku saabsan sida loo badalo M2TS in MP4 in Windows. Haddii aad qabto OS Mac ah, kaliya halkaan, aad u hesho tutorial ah Sida loo Beddelaan M2TS in MP4 ee Mac .
Tallaabada 1 Add files M2TS
Waxaad riix badhanka image "Faylal ay dar" karaa ama kaliya jiidi & amp; jeedi M2TS videos liiska file ah M2TS in ay si toos ah MP4 Converter ah.
Dooro wax soo saarka qaab MP4 ee aad videos adigoo riixaya "Qaabka Output" button image, si aad u hesho "Qaabka"> "Video"> "MP4". Haddii aad rabto in aad si loogu badalo M2TS in MP4 for loo maqli karo ee qalabka, aad talinayaa in ay doortaan presetting ah filaayo in qalabka sheeg ka "Device" category.
Tallaabada 3 bilow raanta
Riix ah "Beddelaan" badhanka si ay u bilaabaan badalo M2TS in MP4, ka dibna waxa aad ka heli kartaa MP4 video dhowr ilbiriqsi ka dib.
Talooyin: Waxaad sidoo kale edit karaa video ah leh taas M2TS in Converter MP4 adigoo gujinaya "Settings" button image si astaysto audio iyo video-beegyada uu sare sida size, heerka jir, heerka yara, iwm Guud ahaan, inta badan goobaha video marti qaado 320 * 240pix sida size caadiga ah ee koombiyuutarka. Haddii files ahbaa aad u weyn oo Upload, aad jari kartaa tirada by dejinta Heerka yar video yara. Kaamirada u qoraan laga yaabaa video in 60fps, taas oo aan ku haboon doonaa flash files. Heerarka jir lagu talinayo waa 20fps, 15fps iyo 12fps.
Qeybta 2: Free M2TS in MP4 Converter,
# 1. Free Video Converter: Wondershare M2TS Free in Converter MP4
The M2TS si xor ah u Converter MP4 aan u bedeli karaan oo keliya videos, laakiin sidoo kale ka soo dejisan YouTube videos, iyo edit aad oo macmal ah videos effortlessly.
Pro: Free, oo isu
1. Waxa kaliya ee awood u badalo caadi videos, laakiin Video Converter Ultimate sidoo kale kuu ogolaanaysaa inaad badalo videos in 3D iyo HD.
2. ma waxa aad isticmaali kartaa si ay u gubaan videos in DVD la marto, si kastaba ha ahaatee, Video Converter Ultimate taageertaa.
3. 30X ugu dhaqsiyaha badan xawaaraha diinta xawaaraha waxaa loo oggol yahay oo keliya 10 beddelaad, halka Video Converter Ultimate ayaa xadeynta lahayn.
Video Converter Ultimate La ogolaaday sida MP4 ka Converter ugu wanaagsan oo dhan-in-mid M2TS in. Waxaa la dhaqmeen karaa sida Converter a video, editor video, downloader YouTube, iyo xataa DVD gubi ah. Just download it hoose si aad u leeyihiin a day!
> Resource > MP4 > Sida loo Beddelaan M2TS in MP4 Si fudud (Yosemite ka mid ah)